Maxaa dib u keeni kara AutoCAD 2010 - Geofumadas
Maxaa soo celin kara AutoCAD 2010
Oktoobar, 2008 AutoCAD-AutoDesk
Halkaan waxaa ku qoran liiska rabitaanka waxa ku riyooday by dadka isticmaala AutoCAD, kuwaas oo loo doortay in ay helaan codka ugu sareeya ee liiska xulashada liiska dhowaan la hormariyay:
1 Ilaalinta qaabeynta sawirka, gaaban, in isbeddelka sawirka la ilaalin karo "xaalad" kama dambeys ah.
2 Qalabka xakameynaya, Looguma tala gelin qaababka cusub halkii xoogga hawlaha block galay Tababaraha hal oo ku soo celi tafatir dheeraad ah oo wax ku ool ah; sida ikhtiyaarka loo daahiriyo blocks ee aan la isticmaalayn, in la beddelo, barta ay ka soo jeedo hab fudud, oo aan remaking iyo bedelida block ah iyadoo ay xulashada ah in ay u raaxayn guryaha nasashada iyo iibsiga u dhexeeya blocks jira ah.
3 Xulashada inay muujiso cabbirada loo baahan yahay ee midabada kala duwan (oo laga soo riixay), tani waxay kaa caawineysaa waxyaabo badan oo lagu ogaanayo haddii cabbirada la cabbiray ama lagu qasbay hab wax ku ool ah.
4 Xakamee xulashada marka la dhejinayo iyo midabeyn, taas oo ah, marka walxaha la soo xushay oo la adeegsado sawirka / shaashadda, calanka xulashada looma lumiyo halka amarka la fulinayo.
5 Aalado fiican oo loogu talagalay maaraynta isometric
6 U beddel qoraalka dhaadheer dadka isku dhafan
7 Heerarka gaarka ah ee amarka wareegga, si ay u awoodaan in ay xakameyaan amarka muuqaalka sheyga, gaar ahaan marka ay buuxsamaan ... waxaa laga yaabaa in la xakameyn karo lakab halkii ay lahaan lahayd ikhtiyaarka ah in la keeno dhinaca hore ama u dirto xagga hoose.
8 Fursadda inaad aragto hagaajinta hingaadka badhanka saxda ah ee jiirka, ma aha in uu yahay Word Word, laakiin waa mid aad u adag in la socdo jeegaree jilbaha dhammaadka.
9 Isku-dubarid isku-dhafasho leh sawir
10 Aragti dhaqsi ah oo ku saabsan waxa ku jira lakabka, taasi waxay ujeedadeeda tahay in mulkiilaha lakabka uu muujiyo aragtida sawirka. Waxay noqon laheyd mid aad wax ku ool ah markaad latirto magacyooyin qarsoodi ah haddii ay tahay inaad sameyso "lakabka"
Sidaas darteed haddii AutoCAD fulisaa this for version 2010 ah, dadka isticmaala ee tartanka ekaan doonaa dhinacyada yaqaan sida "views iyo daydo in 9 jecel yihiin" kala amarrada hawlgalka iyo interface dooni 4 iyo saxiixa digital damac 1 .
Post Previous«Previous Geofumed, noloshayda gaarka ah
Post Next Ku safrida CordobaNext »
4 Jawaab ah "Maxay AutoCAD 2010 dib u soo celin kartaa?"
Victor Chacon isagu wuxuu leeyahay:
Ma jecli haba yaraatee, in la doonayo in la dardar geliyo waxyaabaha qaar, waxay iska daayaan howsha ugu weyn ee amarka, sida «ISOLATE», lakabyada kale maba qarsoonayaan (sidii qaabkii hore) laakiin waxay noqdeen kuwo 'hufan' oo aan isla shaqeeyaan, sida inaad sameysid xiirashada ama wixii la mid ah
Block of size size, fikrad fiican, taas oo u dhaqmi doona iyo sidoo kale qaabka of AutoCAD in ay yeelan karaan boqolkiiba of size of kormeerka ama sida calaamadaha barnaamijyada GIS
Manuel Matamoros isagu wuxuu leeyahay:
Waxa kaliya ee laga yaabo inay ka maqan tahay Autocad, waa block oo aan la barbar dhigo zooms, taas oo ah, marnaba isbeddelo size ee shaashadda; Tani waxay mar walba ka dhigeysaa cabbirka isla marka la daabaco. Waxa aan sameynayno waa waxa aan dooneyno in aan ku daabacno cabir ku habboon.
7. heerka gaar ah oo amarka ka mid ah sawirka, si ay u xakameeyaan si bandhigay ee shay, gaar ahaan marka ay ka buuxsamay ... waxaa laga yaabaa in la xakameyn karin lakabka gashid intii adigoo keliya fursad u keenaan hore ama soo dir dib . !!!!!!